कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ? - Farak Samachar Farak Samachar
कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ?
साउन ६ / शरीरलाई स्वस्थ्य राख्नको लागि स्वास्थ्य खानपानसँगै निन्द्रा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अनिदोका कारण मानिस स्वास्थ्य रहन सक्दैनन् । कम सुत्नुका कारण गुम्सावट, टेन्सन र चिडचिडापन जस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
साथै कम निन्द्राको कारणले मानसिक तनाव जस्ता समस्याहरु पनि देखिन सक्दछन् । जुनसुकै उमेर समुहको मानिसलाई आफ्नो उमेरको हिसावले सुत्न आवश्यक हुन्छ । समय मिलाएर सुत्दा तपाईको छाला चाडै बुढो हुदैन र तपाई लामो समयसम्म स्वस्थ र खुसी जीवन जीउन सक्नुहुन्छ ।
शरीरलाई क्रियाशील र स्वास्थ्य राख्नको लागि खानपानसँगै पर्याप्त आरामको पनि जरुरी पर्छ । यदि शरीरले पर्याप्त मात्रामा आराम पाएनभने हामीले दैनिक गर्ने कामहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो नियमित कार्यलाई सफल बनाउन आवश्यकता अनुसार निन्दा पुग्नेगरी सुत्नुपर्छ । निद्रा कम हुँदा जीवनपद्धति र स्वास्थ्यलाई समेत असर पुर्‍याउँछ।
तपार्ईंलाई कति समय सुत्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा तपार्ईंले कति समय काम गर्नुहुन्छ र कति ‘स्ट्रेस’ लिनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ। भनिन्छ, स्वास्थ्य जीवनका लागि दैनिक ७ वा ८ घण्टा मस्त निदाउनुपर्छ । बच्चाहरुले भने उमेर अनुसार यो भन्दा बढी समय निदाउनु पर्छ । वयस्कले कम्तीमा ८ घण्टा निदाउनै पर्छ ।
भर्खर जन्म लिएका ०-३ महिना दैनिक: १४ देखि १७ घन्टा
शिशु ४-११ महिना दैनिक: १२ देखि १५ घन्टा
बच्चा १-२ वर्ष दैनिक: ११ देखि १४ घन्टा
३-५ वर्ष दैनिक: १० देखि १३ घन्टा
६-१३ वर्ष दैनिक: ९ देखि ११ घन्टा
१४-१७ वर्ष दैनिक: ८ देखि १० घन्टा
१८-२५ वर्ष: दैनिक ७ देखि ९ घन्टा
२६-६४ वर्ष दैनिक: ७ देखि ९ घन्टा
६५ वर्षभन्दा माथिका दैनिक ७ देखि ८ घन्टा (स्वास्थ्यपेजबाट साभार)
कर्णाली नदीको कहर, कसरी बाँचेका छन् बाढीपीडित ?
बच्चाको तालुमा पटक पटक तेल लगाउन हुँदैन